Donald Trump oo digniin adag u diray Dawladda Suuriya iyo xulafadeeda Iiraan iyo Ruushka – Madal Furan
Hoy > Warka > Donald Trump oo digniin adag u diray Dawladda Suuriya iyo xulafadeeda Iiraan iyo Ruushka
Donald Trump oo digniin adag u diray Dawladda Suuriya iyo xulafadeeda Iiraan iyo Ruushka
Madal Furan – Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa Dawladda Suuriya iyo xulafadeeda Iiraan iyo Ruushka uga digay in si aan ka fiirsi lahayn ay u weeraraan gobolka Idlib ee ay jabhaddu haysato.
Isaga oo Twitter soo qoray ayuu ka digay “in lagalo khalad wayn oo banii’aadminimo” kaas oo lagu dili karo boqollaal kun oo ruux.
Ciidammada dawladda Suuriya ayaa la sheegay in ay isu diyaarinayaan in ay dagaal culus ku qaadaan goobtii u dambaysay ee ay jabhaduhu ku xoog badnaayeen ee dalkaas ku taalla.
Qarammada Midoobay ayaa sheegtay in weerarkaas uu dhibaato baaxad leh u gaysan karo kumannaan shacab ah.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa sidoo kale Isniintii ka digtay in Washington ay ka jawaabi doonto haddii Suuriya ay hub kiimiko ah adeegsato ama xulafadoodu ay adeegsadaan.
Safiirka Maraykanka u fadhiya Qaramada Midoobay Nikki Haley ayaa Twitterka ku soo qortay indhaha oo dhan waxay hayaan ficillada ay Idlib ka gaystaan Asad, Ruushka iyo Iiraan.
Maxaa ka dhici kara Idlin?
Iyadoo jabhadaha lagaga adkaaday Suuriya inteeda badan, dagaal lagu qaado gobolka Waqooyi ayaa waddada u xaari doonta dagaalkii ugu dambeeyay ee cuslaa ee colaadda sokeeye ee Suuriya.
Qaramada Midoobay ayaa qiyaasaysa in ay halkaas ku sugan yihiin 10,000 oo ruux oo jihaaddoon ah oo ka kala tirsan jabhadaha al-Nusra iyo al-Qaacida, kuwaas oo gacanta ku haya Idlib.
Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa ilo ayaa sheegtay in madaxweyne Bashar al-Assad uu isu diyaarinayo weerar cududdaas u dhigma.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa sheegay in ay waajib tahay in “argagixisada” laga sifeeyo Idlib, isaga oo ku eedeeyay in ay shacabka gabaad ka dhiganayaan.
Isaga iyo dhiggiisa Suuriya Walid Muallem waxay jabhadaha ku eedeeyeen in ay rabaan in ay qaadaan weerar kiimiko loo adeegsaday oo Idlib ka dhaca, si ay xoogagga dawladda taageersan ugu eedeeyaan una horseedaan weerar uu Maraykanku arrintaas uga jawaabo.
Dmitry Peskov oo ah afhayeen u hadlay Aqalka Ruushka looga arrimiyo ee Kremlin ayaa sheegay qiil loo hayo dhoolatuskii ciidammada badda ee dhawaan ka dhacay Suuriya, wuxuuna intaas ku daray in ay waajib tahay in wax laga qabto Idilib oo noqotay “xarunta argagixisada”.
Qaramada Midoobay Maxay arrintan ka tiri?
Ergayga Qaramada Midoobay u qaabilsan Suuriya Staffan de Mistura ayaa ka digay “mashaakil baaxad leh” hadii dawladdu ay ku dhaqaaqdo gulufka dagaal ee ay ku hanjabtay in ay ku qaadayso Idlib.
Wuxuu sheegay in la sameeyo marino banii’aadminimo si shacabka loogu daad gureeyo si ku meelgaar ah.
Dadka jihaaddoonka ah waa in la jabiyaa ayuu yiri Mistura, balse arrintaasi aysan galaafanin nolosha kumannaan ruux oo shacab ah.
Qarammada Midoobay ayaa aad u danaynaysa in laga baaqsado dhimasho shacab, sidii kuwii ka dhacay qaybo ka mid ah Suuriyo oo ay ku jiraan, Xalab, Raqqa iyo Bariga Ghouta, dublamaasiyiinteedana waxay ku baaqayaan in dhinacyada oo dhan ay is xakameeyaan.
Mudaharaad lagu taageerayo Abiy Ahmed oo maanta ka dhacaya Addis Ababa
Saraakiisha Somaliland oo dejinaya istiraatijiyad lagu difaaci karo magaaladda Laascaanood.
Guddiga joogtada ee Golaha Aqalka sare oo baaq ka soo saaray Xaaladda ka taagan Baydhabo